Video Video သင်တန်းများ
အာရှကျောင်းစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေး, Language ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်တစ်ဦးကမူကြိုကျောင်းများတွင်။ လက်ထောက်သို့မဟုတ်သူနာပြုတစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေး။ (NA) ဒြေဖြင့်ဆေးရုံအတွေ့အကြုံအလုပ်လုပ်နှင့်သင်ကြားရေးရှိသည်သောသူ။
အဆိုပါအာရှကျောင်းတွင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘာသာစကား (AEC School) ဂျပန်အတွက်အေဂျင်စီများနှင့်အတူအခြေခံပညာသူနာပြုလက်ထောက်တစ်ဦးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်အကြီးအကဲတစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Advanced-Kaigo ဘယ်သက်ကြီးရွယ်အိုကုသစောင့်ရှောက်များအတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အထူးကြပ်မတ်ပညာရေးနှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြစ်မှန်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်အပြင်၌။ အာရှကျောင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘာသာစကား (AEC School) လည်းကျောင်းသားများကသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်နိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ငံခြားသားများကိုဂရုစိုက်ဖို့သင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းအားပေး။ ကျောင်းသားများထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျပန်အဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလေ့လာနေကြတယ်။ အပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မပါဘဲ။ အဆိုပါအာရှကျောင်းစောင့်ရှောက်မှုကနျြးမာရေးဘာသာစကားများ။ တစ်ကျောင်းသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်း, ထိုင်းအတွက်၎င်း၏ကြင်နာ၏ပထမဦးဆုံး။
အဘယ်ကြောင့် AEC ကိုကျောင်းမှလေ့လာဖို့
အဆိုပါသင်တန်းကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများဂရုစိုကျဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။. Advanced-Kaigo သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားတွေအဘို့အဂရုစိုက်။
သင်တန်းပြီးနောက် Advanced-Kaigo သငျသညျတံခါးခုံကိုလွန်တဲ့အခါသင်, ထိုကဲ့သို့သောဂျပန်အဖြစ်, ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
အခမဲ့ မက်ထရိုအားဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အဆင်ပြေခရီးသွားနေပါ။ (Sutthisan ဘူတာ) ။
အာရှကျောင်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဘာသာစကား (AEC School) ဘန်ကောက်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ အနား MRT Ladprao Offer Central Rama 9, Fortune Town Esplanade Park Rangsit. Union mall Central ladprao Chatuchak တနင်္ဂနွေစျေးကွက် မေးလ်မှမြေအောက်ရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူမွောကျပိုငျးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်သွားရောက်။
(* တာဝန်သို့မဟုတ်အချိန်ပိုဖို့အေဂျင်စီနဲ့လုံ့လဝီရိယပေါ် မူတည်. ပျမ်းမျှဝင်ငွေ။ )